musha Africa Bukola Saraki Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Yedu Bukola Saraki Biography inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Nyaya dzerudo, Mararamiro, Hupenyu hwePamoyo uye Net Kukosha.
Kuongororwa kweBukola Saraki nyaya yehupenyu kunosanganisira pamberi pezita uye mhuri yake kumashure. Zvikuru zvakadaro, mazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve kukwira kwake kwezvematongerwo enyika. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveBukola Saraki's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Bukola Saraki Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kune ekutanga maBiography, ane zita remadunhurirwa "Anesimba wezvematongerwo enyika eKwara". Abubakar Bukola Saraki akazvarwa pazuva re19th raZvita 1962 paguta reguta reHampstead, United Kingdom.
Akazvarwa kuna amai vake Florence Morenike Saraki uye kuna baba vake, Late Olusola Saraki (wezvematongerwo enyika ane ruzivo).
Saraki Akakurira kuNorthwestern Nigeria pamwe nevanun'una vake vatatu avo vese vakazvarwa muLondon. Aive dangwe re 'imba' uye nekuda kwechinzvimbo chake mumhuri, akagovana chisungo chakasimba nababa vake vaiwanzoenda naye kumisangano yemahofisi eguta.
Simba raiva chisungo pakati paSaraki nehanzvadzi yake duku Gbemisola, anonyanya kuzivikanwa nekunonoka, Gbemi. Doo aiva makore matatu ari oga muzera asi akakura achifara pamwe nekugoverwa kwevana vaduku kunosanganisira kusarudzwa kwekupedza mazororo muLondon.
Vabereki vaSaraki vakafanoona ramangwana rakajeka revaviri mune zvematongerwo enyika uye vakaita zvese zvavaigona kudzidzisa vese nekupihwa dzidzo yakanaka.
Bukola Saraki Dzidzo:
Chinozivikanwa pakati pekufambira mberi kwekudzidza kwaSaraki yaive dzidzo yake yechikoro chepamusoro pa Madzimambo College Lagos pakati pe1973 kusvika 1978 paakagara kuWest African Examination Council Examination, WAEC. Akabva atanga kunyora Cheltenham College muUnited Kingdom kwaakawedzera kupedzisa kubata kune yake yepashure-yekutanga dzidzo
Saraki akaenda kuLondon Hospital Medical College yeYunivhesiti yeLondon kwaakadzidza kuita chiremba. Akawana MBBS yake kubva kuYunivhesiti yambotaurwa uye akashanda sechiremba paRush Green Hospital, Essex UK
Kudzokera kuNigeria, Saraki akashanda semutungamiriri weSociete Generale Bank Nigeria Limited kwemakore gumi (10-1990). Iyo nguva yehukama hwakareba-gumi hwekushanda kwebasa pamwe nebhangi muNigeria zvakare rakamuona achivaka hukama hwakakosha hwezvematongerwo enyika.
Bukola Saraki Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Chekutanga pakati pemubairo wehukama hwezvematongerwo enyika hwaSaraki kwaive kugadzwa kwake seMubatsiri Anokosha paBhajeti kune aimbova Mutungamiriri Olusegun Obasanjo.
Mabasa ake munzvimbo iyoyo anosanganisira kugadzirirwa kwebhajeti ra2000 na2001 pamwe nekuumbwa kwemitemo mikuru yehupfumi. Kubudirira kwakanyorwa naSaraki mumitemo yake yakamusimbisa kwakakwikwidza musarudzo dzemagavhuna mudunhu rake, Kwara.
Saraki akakunda sarudzo izvo zvakaita kuti akwanise kushandira kwemakore mana sarudzo yake isati yawedzera yakawedzera mamwe makore mana pachigaro chake. Basa rake muKutonga Kwara State rakamuona achipihwa huwandu hwekuzivikanwa uye nemabasa akamutorera mukurumbira.
Zvinosanganisira; Sachigaro weNigeria Governors Forum, Mutungamiriri weOrder yeNiger (CON), pakati pevamwe.
Izvo zvakabudirira zvakamubatsira pakuwana chigaro che senatori sezvo Seneta inomiririra Kwara Central mu 2011. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Toyin Saraki ndiani? Mukadzi waBukola Saraki:
Bukola Saraki anga ari muhukama hwemakumi emakore nemukadzi wake, Toyin Saraki. Toyin Saraki, semurume wake, akauyawo kubva kune vakapfuma uye vezvematongerwo enyika, maitiro anowanzoonekwa nevanhu vemuNigeria.
Vakasunga pfumo mu1991 uye vakwanisa kuchengetedza hukama husina nyadzi.
Kufambira mberi kusvika zuva rino Toyin ndeupi wehutano philanthropist pamwe chete nemusunguri uye mutungamiri we Wellbeing Foundation Africa.
Vana vana vakatakurwa nekubatana kwavo. Zvinosanganisira; Oluwaseni Saraki, Halimat Oluwatosin Saraki, pamwe nemapatya; Teniola Saraki naTeniayo Saraki.
Bukola Saraki Hupenyu Hwemhuri:
Saraki akaberekerwa mumhuri yakabudirira ine hupfumi hwezvematongerwo enyika. Tinokuudzai nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro paBaba Vake; Baba vaSaraki Olusola Saraki aive wezvematongerwo enyika ane hunyanzvi uye seneta wedunhu repiri reNigeria. Olusola zvakare chiremba akarovedzwa uyo akadzidza paUniversity yeLondon uye St George's Hospital Medical School.
Olusola akaita zvakanaka kuti agadzire mwanakomana wake mune zvematongerwe enyika asati afa munaNovember 2012 mushure mekurwa kwenguva refu nekenza.
Nezvaamai Vake; Amai vaBukola Saraki ndiFlorence Saraki. ndiye amai kune vanun'una vaSaraki, Gbemisola naLaolu Saraki.
Nehanzvadzi yake; Hanzvadzi yaBukola Saraki, Gbemisola Ruqayyah inhengo yenguva imwe muNigeria National House of Assembly pamwe neSeneti.
Mukadzi wesimbi uyo ari muinishuwarenzi akabata zvinyorwa zvekuva mukadzi wedare reparamende ane huwandu hwakanyanya hwemari dzinotsigirwa. Iye zvakare anoonekwa seye Kwara mamiriro makuru ehuswa anokurudzira.
Pamusoro pehama dzake; Vakoma vaSaraki ndiTope naLaolu Saraki. Ivo vaviri vakwanisa kurarama hupenyu hwakavanzika nekuda kwekuti havana zvematongerwo enyika.
Bukola Saraki Biography Chokwadi - Nyaya ine Baba Vapashure:
Olusola akashongedza Saraki mune zvematongerwo enyika uye aibatsira zvikuru kumwanakomana wake kubudirira mune zvematongerwo enyika. Zvisinei, hukama hwababa-mwanakomana hwakashanduka hukwikwidzana mu2011 apo Saraki akaenda kunopesana nesarudzo yaOlusola kune wake (Saraki) gavhuna wenyika mutsivi.
Olusola aigara achida hanzvadzi yaSaraki Gbemisola Ruqayyah kuti abudirire Saraki saGavhuna wenyika yeKwara. Nekudaro, Saraki akashanda achipokana nezvido zvababa vake nekuona kuti iye Godson uye gurukota rezvemari, Abdulfatah Ahmed vakava gavhuna.
Kunyange zvazvo Olusola akanzwa kurwadziwa, akawana zvikonzero zvekuregerera mwanakomana wake nekucherechedza kuti:
Bukola akauya kuzondiona muLos Angeles kuzokumbira ruregerero. Gare gare, akaita mhando dzese dzevanhu vane simba uye vanoremekedzwa vanhu kuzonditeterera. Zvakaitika kwandiri panguva yesarudzo yekupedzisira yaive nhamo. Handina kumbozvitarisira asi ndinoziva kuti ndozvange zvichidikanwa naWemasimbaose Allah, uye ndakazvitora semunhu wenyama.
Bukola Saraki Untold Biography Chokwadi - Ugari Hwechipiri:
Saraki akaberekerwa muLondon uye nekudaro ane hunyanzvi hwekuva mugari wemuNigeria neUnited Kingdom. Nyaya dzekuva kwake mugari wenyika mbiri dzakakurukurwa nevazhinji mushure mekukwira kwake seMutungamiriri weSeneti weNigeria mu2015.
Vakawanda vaitaura kuti Saraki haasi mugari weNigeria nekuda kwekuva nehukama hwehukama. Nokudaro, haakwanisi kukwikwidza uye kubata nzvimbo dzakasarudzwa.
Zvisinei, Chikamu 28 chemutemo weNigeria chinopa izvozvo
"Zvichienderana nezvimwe zvinopihwa nechikamu chino, munhu acharasikirwa nekuva mugari weNigeria kana asiri mugari wekuNigeria nekuzvarwa, akawana, kana anochengeta ugari hwemo kana nyika yenyika, isiri yeNigeria, kwete mugari nekuzvarwa. ”
Mune mamwe mazwi, imwe inorasikirwa nehugari hwemuNigeria kana mumwe asiri weNigeria nekuzvarwa uye achizvidira anowana ugari hweimwe nyika. Izvi zvakawedzera kumutsa mibvunzo yekuti ndiani mugari nekuzvarwa, mubvunzo unopindurwa nechikamu 25 (1C) chebumbiro reNigeria.
Inotaura kuti ani zvake akaberekerwa kunze kweNigeria anogona kuva muNigeria vagari veNigeria kana vabereki vavo vagara vagari veNigeria.
Zvingarangarirwa kuti Saraki vabereki vaiva vagari vomuNigeria vakaberekera Saraki muLondon. Somugumisiro, nyaya dzakapoteredza ukama hwake huviri dzakanga dzisina mvura.
Bukola Saraki Bio - Code yeKufambisa Dare redzimhosva:
Bukola Saraki akapomerwa mhosva dzehuwori neHurumende yeHurumende yeNigeria Nguva pfupi yapfuura kuva Mutungamiriri weSeneti yenyika. Chinozivikanwa pakati pemhosva dzakakwidzwa pamberi peCode of Conduct Tribunal kwaive kunyepa kwenhema kwemidziyo uye kutadza kuzivisa zvimwe zvinhu.
Mukuwedzera, Saraki akatongerwa nekodzero dzekunze kune dzimwe nyika paaishanda semukuru wehurumende pakati pezvimwe zvikwereti.
Asi iye akaregererwa uye akaregererwa neCCT muna June 2017 pachinangwa chokuti Hurumende yeGurumende haina uchapupu hwekupa mhosva. Saizvozvowo, akabudiswa uye akaregererwa neDare Repamusorosoro mushure mekunge nyaya yacho yakadzingwa kuburikidza nedare rekukwirira.
Bukola Saraki Chokwadi cheMunhu:
Saraki ndomumwe anorova vakawanda sekurangana. Izvi zvinoonekwa munzira yaakayambutsa kaviri bato rake kuti ave mutungamiri wedare reseneti reNigeria.
Mukuwedzera, akagadzira kupesana kwema senisheni kune bato rekupikisa iro rakazobatana naJuly 2018.
Zvisinei, iye nyanzvi mune zvematongerwo enyika anonzwisisa anochengeta hupenyu hwake hwepachivande kubva kuvanhu vose pasinei nekukakavadzana kwezvematongerwo enyika.
Bukola Saraki Chokwadi - Kwete Zvematongerwo enyika Chete:
Kunze kwezvematongerwo enyika Saraki anoteera anotevera nhabvu. Kirabhu yake yaanofarira iArsenal FC uye ane kirabhu inozivikanwa seABS FC.
Ini ndiri fan arsenal uye zvakare ndine kirabhu yebhola muNigeria @absfcilorin Hatifanire kugara tichishoropodza https://t.co/NPJZahsKkH
- Dr. Abubakar Bukola Saraki (@bukolasaraki) February 14, 2016
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Bukola Saraki Childhoodhood Nhau pamwe untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Dai 21, 2021